ကျနော်တို့က မန်ချက်စတာရဲ့ ဘုရင်တွေဖြစ်နေဆဲပါ - ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ဒီဇင်ဘာ ၇ ။ ။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ နှစ်နှစ်ဆက် ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလို လက်ရှိမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို (၁၁)မှတ်နဲ့ ဖြတ်ထားပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားကတော့ သူ့ရဲ့အသင်းဟာ မြို့ခံပြိုင်ဘက်ထက် ပိုပြီးကြီးကျယ်တယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေမယ့်လည်း အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် နည်းပြက သူ့အသင်းဟာ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်နေ့မှာ ထိပ်ဆုံးကို ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ ကျနော်တို့အသင်းရဲ့ ကြီးကျယ်မှုက ဒီကွာဟချက်တွေကို ကျဉ်းမြောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားရမှာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကျနော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အသင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သလို ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း ကျနော်တို့ သွားရမှာပါ။ ဒါဟာ မန်ယူနိုက်တက်မှာ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ရမယ့် အရာလို့ ကျနော် ထင်တယ်။"လို့ စနေနေ့မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ စီးတီးနဲ့ တွေ့ဆုံမယ့် ဆိုးလ်ရှားက ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့မှာ ဒါကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အရင်းအမြစ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လူတွေလည်း ကျနော်တို့မှာ ရှိနေတယ်။ ဒီတော့ ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ?"
ဆိုးလ်ရှားဟာ စီးတီးအသင်း ဒုတိယအကြိမ် တန်းဆင်းသွားတဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ရဲ့ နွေရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၁ မှာ စီးတီးကို (၁-၁)နဲ့ သရေကျတဲ့ပွဲမှသာ ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
"အနည်းဆုံးတော့ အခုဆိုရင်ဗျာ မန်ချက်စတာဒါဘီကို ကျနော်တို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ဆင်နွှဲနေရတာဗျာ။"လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
"ကျနော့်ရဲ့ ကစားသမားဘဝတုန်းကဆို မန်ချက်စတာဒါဘီ တစ်ပွဲကန်ဖို့ကို နှစ်တော်တော်များများ စောင့်ယူရတယ်။"
စီးတီးရဲ့ မကြာသေးခင် လွှမ်းမိုးထားမှုရှိပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အသင်းအဖြစ် ဆက်ရှိနေသေးသလားလို့ မေးမြန်းရာမှာ သူက "Yeah."လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
စီးတီးအသင်းရဲ့ ငွေကြေးသုံးစွမှုပါဝင်ကြောင့် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ အမြဲရုန်းကန်နေရလိမ့်မယ်လို့ နည်းပြဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်မိုယက်နဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို ဆိုးလ်ရှားက ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
"ဒါကို သဘောမတူလိုက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဘာလုပ်သွားမှာလဲ? ခင်ဗျား အရှုံးပေးသွားမှာလား? သူတို့ကို စိန်မခေါ်ရဲတော့ဘူးလား? ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။"လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
Ole Gunnar SolskjaerManchester UnitedManchester CityPremier League